पाँचौैँ पानवारी भलिबल कप माघ ६ देखी हुने
धरानः सयपत्री वोइज युनियन क्लवले २०७२ साल देखी सुरु गरेको प्रदेश स्तरिय पानबारी भलिबल रनिङ कपको पाचौँ संस्करण माघ ६ गतेवाट धरान–६ पानबारीको सिमल चौरी खेल मैदान सुरु हुने भएको छ ।
सो प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागी माघ २ गते सम्म टिम दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । दर्ताका लागी शुल्क लाग्ने छैन । अहिले सम्म ६ टिमले आफ्नो टिम दर्ता गराइ सकेको क्लबले आज धरान–८ द वेसमेन्टमा पत्राकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको छ । प्रतियोगितामा १ नम्बर प्रदेशका १६ वटै जिल्लालाई सहभागिताका लागी जानकारी गराइनेछ । पहिले संस्करणहरुलाई हेर्ने हो भने १० टिम सहभागी हुने अनुमान गरिएको आयोजकले वताएको छ ।
प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी विजेतालाइ ७५ हजार रहेको छ । े उपविजेतालाई ४१ हजार रहेको छ । क्लबले प्रथम संस्करण देखी चौथौ संस्करण सम्म विजेतालाई पुरस्कारको राशी क्रमश १५ हजार , ३० हजार, ५१ हजार , ७५ हजार र उपविजेता ११ हजार, १५ हजार, ३१ हजार र ४१ हजार रहेको थियो । पाँचौँ संस्करणमा भने पु्रस्कार राशी यथावत राखिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सहयोग गर्ने गरेको थियो र पुरस्कार राशी बृद्धि गर्दै लगेको थियो । यो पटक परिषदलले सहयोग नगर्ने भएपछि पहिले कै पुरस्कार राशीलाई निरन्तरता दिइएको छ । अझै पनि परिषदले सहयोग गर्ने भए पुरस्कार राशी बढ्ने आयोजक वताएको छ ।
सयपत्री बोइज युनियन क्लवले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको संयोजन धरान उपमहानगरपालीका र ६ नं. वडा कार्यालयले गर्ने छ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक टुबोर्ग बियर रहेको छ । सह–प्रायोजक बराह ग्रुप र निशान बचत तथा ऋण सहकारी रहेको छ । यो भन्दा पहिलेका विजेता र उपविजेताहरु क्रमश प्रथम संकरण त्रिवेणी युवा क्लब मोरङ र याङशिला युबा क्लब मोरङ, दोस्रो संकरण डुम्राहा भलिबल क्लव सुनसरी र १ नं. प्रदेश प्रहरी रानी बिराटनगर ,तेस्रो संस्करण १ नं. प्रदेश प्रहरी रानी, बिराटनगर र सयपत्री बोइज युनियन क्लब पानवारीले हात पारेको थियो । चौथो संस्करण सयपत्री बोइज युनियन क्लब पानवारी र भोजपुर भलिबल क्लब भोजपुर रहेका थिए ।